Maalinta: Meey 21, 2020
Shirkadaha naqshadeynta websaydhada sameeya naqshadaha websaydhada waa inay ku muujiyaan howlahooda qaabab gaar ah. Haddii kale, waxay u horseedi doontaa shaqo qaldan iyo qaldanaan inay dhacdo oo hawshu ma gaari doonto natiijo kasta. [More ...]
Waxaa lagu soo waramayaa in 150 kun oo badmaax oo ku sugan badaha adduunka ay ku xayiran yihiin badaha marka lagu qasbo inay qandaraasyadooda kordhiyaan dhowr jeer sababo la xiriira dillaaca corona. Sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah, ka hor intaanan badmaaxiinta bilaabin fasaxa mushaarka, [More ...]
Shuruudaha iibsiga ee shahaadada waxaa lagu go'aamiyay hay'adaha TURKAK ee la aqoonsan yahay, kuwaas oo lagu bilaabay isuduwidda Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska, waxayna soo saari doontaa shahaadooyin ku jira qaab-dhismeedka "Shahaadada Dalxiiska Dalxiiska ee Caafimaadka", oo ah mid ka mid ah tusaalooyinka ugu horreeya adduunka. Turkiga [More ...]
Qoraalka ay soo saartay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska 20.05.2020, waxaa lagu soo warramey in nidaam caadi ah oo la xakameynayo lagu bilaabay baaxadda tallaabooyinka looga hortagayo fiditaanka Coronavirus (Covid-19), waxayna shaqeyn doontaa maalinta la go'aamiyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha. [More ...]
Kenan Çalışkan, Gudoomiyaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen, TCDD Taşımacılık A.Ş. Wuxuu ku booqday Maareeyaha Guud ee Kamuran Yazıcı xafiiskiisa wuxuuna weydiistay Dhiiri-gelinta Wareysiga Dhiirrigelinta iyo Beddelka Cinwaanka. TCDD Taşımacılık A.Ş. Guud [More ...]
"Ma Ka Ogeyd?", Waxaa lagu soo saaray iyadoo lala kaashanayo İGA oo ilaalinaysa Mu'asasadaada qashinka, iyada oo ujeedadeedu tahay kor u qaadida wacyiga bulshada ee ku saabsan saamaynta qashinka deegaanka iyo muhiimadda dib u warshadaynta. Tartanka Sawirka Qaranka iyo Tartanka Fiidiyowga Gaaban oo la soo gabagabeeyey. [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sheegay inay sii wadaan shaqooyinkooda oo dejinaya taraafikada isla markaana kordhinaya raaxada gaadiidka iyagoo aan gaabin. Duqa magaalada Büyükkılıç, oo raacaya howlaha ka socda Isgoyska DSI, ayaa adkeeyay isu socodka baabuurta ee taraafikada Kayseri. [More ...]
Shirkadda loo yaqaan 'Mars Logistics' ayaa noqotay shirkaddii ugu horreysay ee adeegsata khadka Marmaray ee loogu talagalay dhoofinta xamuulka caalamiga ah. Maraakiibta caalamiga ee xamuulka qaada ee loo yaqaan 'Mars Logistics' ee xamuulka qaada tareenka laga bilaabo 15ka May sida loogu qorsheeyay in laga hirgaliyo Turkiga markii ugu horeysay ee Marmaray [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu sheegay in dhererka khadka tareenka Konya-Karaman uu yahay 100 kiiloomitir wuxuuna yiri, "Kaabayaasheedii iyo dhismaheedii cusuba waa la dhammaaday. Daraasadahayaga ku saabsan saxeexa way sii socdaan. Waxaan rajeynayaa hadafkeena inuu yahay bilowga ganacsiga dhamaadka sanadka. ” [More ...]
Turkcell, Türk Telekom iyo Vodafone waxay siiyaan 1 GB Eid al-Fitr hadiyad. Iyada oo maaddadan ay si gaar ah ugu diyaarsan tahay muwaadiniinteena ka barta internetka ololeyaasha internetka ee bilaashka ah, dhammaan waqtiga guriga lagu qaato [More ...]
TCDD Tasimacilik waa arin wax laga ogaan karo marka adeegyada Eastern Express, Touristic Eastern Express iyo Van Lake Express, oo shaqada looga joojiyey cudurka faafa ee coronavirus, ay bilaaban doonaan. Waxaa ku farxay safar, sawir qaadayaal iyo taageerayaal [More ...]
Mashruuca Guryeynta Bulshada ee Kiptaş Silivri 3aad, guryaha dabaqa ah ee kun kun 513 ka-faa'iideystayaal ah waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo saamiyo laga helay Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu. Sawirka, kaasoo berri dhici doona by notary, İBB iyo Kiptaş [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay ka bilawday dhaqan celis bulsho masaafad badan Kordonboyu, kaas oo ay kumanaan kun oo qof qaabilaan bilaha xagaaga. Deganeyaasha Izmir way ku qanacsan yihiin dalabka. Tallaabooyinka 'Coronavirus' waxay ku qaldan yihiin dhinaca tallaabooyinka bililiqeysiga 'Izmir Metropolitan Municipal' ee Turkiga [More ...]
Zihni Derin (wuxuu dhashay 1880, Muğla - taariikhda geerida Agoosto 25, 1965, Ankara), cilmiga duulistaha Turkiga, bare. Wax soo saarka shaaha ee Turkiga ayaa horseeday bilowga iyo fidinta; Waxaa loo yaqaanaa “aabaha shaaha”. Sanadkii 1880-kii [More ...]
Madaxweynaha Warshadaha Difaaca Prof. Dr. İsmail DEMİR wuxuu sameeyey bayaan kusaabsan mashruuca Joint Strike F-35 Lightning II ee gudiga oo uu soo abaabulay STM ThinkTech. Bayaanka uu soo saaray Madaxweyne DEMİR, “Mareykanka Mareykanka [More ...]
Engin Arık (14kii Oktoobar 1948 - 30 Noofambar 2007) wuxuu ahaa fisikiste maaddada Turkiga ah isla markaana horay u ahaa borofisar ka tirsan waaxda jimicsiga ee Jaamacadda Boğaziçi. Miinada loo yaqaan 'Thorium mine' waxay noqon kartaa xalka nadiifka ah iyo dhaqaalaha ee dhibaatada tamarta. [More ...]
Khibrada laga helay T-629, T-129 ATAK Weeraro iyo Tikni taariikhi ah helikobtar Helicopter, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Waa diyaarad helicopter ah oo ay diyaarisay (TUSAŞ). Warshadaha Duulista iyo Hawada Turkiga [More ...]
Mahmut Özer, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada qaranka, ayaa u sheegay wargeys ku saabsan qorshayaashiisa ka dib cudurka daacuunka ee loogu talagalay xarumaha R&D ee lagu aasaasay dugsiyada sare ee xirfadda. Özer wuxuu yidhi, Waxaan haysan doonnaa ku dhawaad ​​20 R&D xarumood. Xarun kastaa waa ka duwan tahay [More ...]
Maanta, Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura waxay galeen awood buuxda iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo Raiisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe. Waxay aqbali kartaa 35 kun oo bukaan-socod ah bukaan-socod maalin kasta iyo 500 astaamo ah [More ...]